DTG → Direct To Garment printing bụ usoro ụzọ ọgbara ọhụụ
DTG ebi akwụkwọ - a oge a ụzọ nke mma mma
DTG mbipụta ma ọ bụ "Direct To Garment" bụ usoro nke oge a ihe ndozi na akwa. Usoro DTG na-enye gị ohere itinye ihe eserese ọ bụla na akwa owu ma ọ bụ owu nwere ngwakọta nke elastane / viscose. Ejiri eserese pụrụ iche mepụta eserese. Ngwaọrụ anyị nwere na igwe akụrụngwa anyị bụ ụdị kachasị ọhụrụ nke onye nbipute Nwanne GTXpro Bulknke, ekele maka isi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, na-ebipụta ngwa ngwa na ihe ahụ. Mbipụta iji DTG usoro na-enyere aka mmeputakwa agba zuru oke na ntụgharị agba. Printing-ekwe omume na-enweghị mkpa iji kwadebe oru ngo si na otu iberibe.
Depụta foto na uwe elu site na iji usoro DTG
Ọdịdị nke mbipụta DTG dabere n'ọtụtụ ihe. Nke mbu, ihe nlere na ihe omuma ya - ihe ohuru ohuru, karia mma mma na arụpụtaghị. Ihe ndị ọzọ na - eme ka ike gwụ anyị bụ ụdị agba eji eme ya, akwa a na - ebipụta ya na nka onye ọrụ.
Nwanna anyị GTXpro Bulk ngwa nbipute na-eme ka o kwe omume bipụta ya na ogo ya nke 40,6 cm x 53,3 cm. N'ihi nbelata ụgwọ na oge mmezi, ọ ga-ekwe omume ịkwadebe igwe maka ibipụta ngwa ngwa ma belata ọnụ ọgụgụ nke nkwụsị na ọrụ. Isi kachasị mma kachasị elu ọ bụghị naanị na-akwụsị usoro obibi akwụkwọ mgbe feeder dị nso na isi, mana ọ na-echekwa oke oke dị n'etiti isi na onye na-eri nri, nke na-ekwe nkwa ịdị elu dị elu mgbe niile. Ọhụrụ, mma ọcha ink isi na-amụba ọnụ ọgụgụ nke nozzles na-enye a 10% ngwa ngwa obibi akwụkwọ mode. Nke a, n'aka nke ya, na-atụgharị oge nkenke dị mkpụmkpụ maka ndị ahịa.
DTG ngwa nbipute
Ohere sara mbara nke mbiputa DTG
Ihe omuma ohuru DTXpro Bulk bu ihe nlere di iche iche. Ọ na - enye ikike imepụta ihe, na - eme ya ka ọ dị mma maka mmezu.
Ahịa na ụlọ: GTXpro bụ ezigbo azịza maka ịkwadebe ngwa ahịa maka ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, klọb na ebe ọrụ. Teknụzụ DTG na-agbanwe ma na kọmpat. Ekele ya, ị nwere ike ịgbasa ụlọ nkwakọba ihe gị na ngwaahịa ndị ahaziri iche dị ka Uwe maka onye ọ bụla nwere aha ya, aha ọrụ, akpa mgbasa ozina ọbụna akpụkpọ ụkwụ na nkà nke aka gị. Nhazi onwe ọ na-akwado njirimara nke onye ọrụ na ụdị ahụ, nke na-emetụta ya ọdịdị dị mma na ntụkwasị obi na-abawanye.
DTG bipụta na otu ndị ọrụ afọ ofufo T-shirts
Echiche maka otu na onyinye dị iche iche: Ekeresimesi, Ista, jubilii, ihe ịga nke ọma ndị ọkachamara, Motherbọchị Ndị Nne ma ọ bụ Childrenbọchị Childrenmụaka bụ oge kachasị ewu ewu iji kwadebe onyinye mgbe ụfọdụ. Ka mmadụ na - eme ya, na - ahaziri ya mgbe ụfọdụ - ihe ka mma na ọnọdụ siri ike. Onyinye ụlọ ọrụ maka ndị ọrụ ma ọ bụ jubilii onyinye dị ka enọ na asọmpi nnukwu ohere na-eme ka onyinyo ahụ dị ọkụ. N’aka nke ya, onyinye, ọkachasị nke bara uru, dịka akwa nhicha ahụ maka emume ncheta afọ iri abụọ nke ụlọ ọrụ ahụ ma ọ bụ jiri akara nke onyinye a natara maka ụlọ ọrụ ahụ, ga-abụ nnukwu ngwaọrụ maka ndị mmekọ na ndị ahịa nwere ike maka mesie ọnọdụ ụlọ ọrụ ahụ ike megide asọmpi ahụ.
N'aka nke ya, ohere nke ibipụta site n'otu mpempe ga-emepe nhọrọ iji kwadebe onyinye mbụ maka onye pụrụ iche na ụbọchị pụrụ iche. Mmekọrịta nke mmadụ n'otu n'otu nke ejiri onyinye nyere site na ntinye aka nke onwe ya, na ịdị mma dị elu, ga-ahapụ ncheta dị mma ruo ọtụtụ afọ. GTXpro na-enye gị ohere ịnọgide na-agbanwe na mmepụta, na-enye anyị ohere ịzaghachi na usoro mgbanwe na ngwa ngwa na akụ na ụba.
DTG mbipụta anaghị achọ nkwadebe oru ngo, nke bụ otu n'ime isi uru ya (dịka ọ dị na mbipụta ihuenyo ma ọ bụ ihe mkpuchi kọmputa). Ogbugbu ya ga-ekwe omume ozugbo site na faịlụ onye ahịa, nke a ga-edozi ya. Enwere ike ibipụta site na otu ibe, nke na-enye gị ohere ịme ya nnwale ule tupu i mee onu ogugu kariri. Ọzọkwa bipụta foto ọ ga - ekwe omume, mana ọ dị mkpa na ọ nọ na mkpebi kachasị elu enwere ike.
NDUR NA-EME: Ọ bụ nnukwu uru nnukwu anwụ ngwa ngwaọ bụrụ na a na-eme ya na akụrụngwa ọkachamara. Ojiji nke ndozi ohuru maka ịrụ ọrụ akụ na ụba na-enye ohere ọnụahịa dịtụ ala nke ibi akwụkwọ. Ihe ya kwesiri ibu owu ma obu jiri ogwu nke viscose, ma obu elastane, ma odi nkpa ka o ghara igbati.
Gbaso ndụmọdụ ndị nrụpụta ga-enye anyị ohere ịnụ ụtọ mmetụta nke ọrụ anyị ogologo oge. N'ihi enyemaka nke ndị otu anyị, ị nwere ike ịhazigharị ụzọ nke ịchọ mma, ma ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa ndị kwesịrị ekwesị na nke anyị ụlọ ahịa.
DTG obibi akwụkwọna-ebi akwụkwọ na uweDTG na akpaDTG dị ọnụ alaNgwa na mbipụtaT-uwe elu na-ebipụtaDirect ebi akwụkwọmbipụta nke eserese na ederedeụlọ ọrụ logo ebipụtabipụta na sweatshirtsna-ebi akwụkwọ na T-shirtsna-ebi akwụkwọ na T-shirts maka ihe omume ahụbipụta na uwena-ebi akwụkwọ na akwa na ọnụ ala dị alana-ebi akwụkwọ na t-shirtsna-ebi akwụkwọ na akpaebi akwụkwọ site na otu ibennwale ulefoto obibionyinye maka asọmpi ahụuwe nwere mbipụta maka ndị ọrụonyinye maka nne nneonyinye maka nna nnaonyinye maka nwanyionyinye maka mamaonyinye maka mmaduonyinye maka enyionyinye maka enyionyinye nwanneonyinye maka papaonyinye christmasncheta onyinyeụbọchị ọmụmụ onyinyeonyinye maka ndị ọrụonyinye mmadụ n'otu n'otuonyinye maka ezumikeahaziri onyinyeọnụ ala obibiọnụ ala ebipụtana-adịgide adịgide logo obibinwere mbipụta na T-shirtsbipụta na uwe